Madaxweynaha Faransiiska Ayaa Maraya Imtixaan adag oo ku aadan Baarlamanka dalkaas - RBN NEWS
KUWII UGU DANBEYEY
Agaasimaha guud ee wasaaradda Ganacsiga Ayaa furay shirka Ganacsatada Somaliyeed Iyo Dawlada Somalia
Wasaaradda Waxbarashada, Hiddaha iyo Tacliinta sare ee dalka ayaa maanta soo gaba-gabeysay Imtixaanka Shahaadiga ah ee Fasalada 12-aad
Dhagayso Warka Subax RBN NEWS
Ergayga Gaarka Arimaha Abaraha Ee Xafiska Madaxweynaha Ayaa Kahadlay Xaalada Abaaraha Gobalka Gedo
Madaxweynaha Serbia Aya Warqadaha Aqoonsiga Danjirenimo ka guddoomay Danjiraha JFS u qaabilsanaan doona Dalka Serbia
Maayarka Muqdisho Ayaa Magacabay Gudi Kashaqeeya Xuska Maalmaha Xuriyada
Dhagayso Warka Galab RBN NEWS
Wasiir Maliyada Somalia Ayaa Kadayriyay Dhaqaalaha Somalia Oo Liita
Home»WARARKA CAALAMKA»Madaxweynaha Faransiiska Ayaa Maraya Imtixaan adag oo ku aadan Baarlamanka dalkaas
Madaxweynaha Faransiiska Ayaa Maraya Imtixaan adag oo ku aadan Baarlamanka dalkaas
By Axmed Mido June 12, 2022 Updated: June 12, 2022 No Comments3 Mins Read
Dadka Faransiiska ah ayaa u codeynaya doorashada baarlamaanka xilli madaxweyne Emmanuel Macron uu doonayo in uu helo aqlabiyaddiisa xilli ay sii kordhayso khatarta ka imaanaysa isbahaysiga bidix.
In ka badan 6,000 oo musharrax oo da’doodu u dhaxayso 18 ilaa 92 jir ayaa u tartamaya 577 kursi oo ka tirsan baarlamaanka qaranka wareegga koowaad ee doorashada.
Kuwa hela codadka ugu badan ayaa u gudbi doona wareegga labaad ee muhiimka ah 19-ka June.
Ka dib doorashadii ku celiska ahayd ee Mr Macron bishii May, isbahaysigiisa dhexe waxa uu raadinayaa aqlabiyad buuxda oo u sahlaysa in uu fuliyo ballamihiisii ololaha, oo ay ku jiraan canshuur dhimis iyo in da’da hawlgabka laga dhigo 62 ilaa 65.
Balse ra’yi ururintii ugu dambeysay ayaa sheegaya in madaxweynaha iyo xulafadiisa laga yaabo inay dhibaato kala kulmaan ku guuleysiga kala bar kuraasta baarlamaanka.
Dawlad tiro badan, laakiin aan aqlabiyad buuxda ahayn wali way awoodi kartaa inay xukunto, laakiin kaliya waxay la gorgortami kartaa sharci-dejiyeyaasha.
Xoogaga mucaaradka ah ayaa u muuqda isbahaysi cusub oo dhawaan la sameeyay oo ka kooban bidix, cagaar iyo shuuci oo uu hogaaminayo ninka mayalka adag ee Jean-Luc Melenchon.
Waxa uu ku booriyay codbixiyayaasha in ay aqlabiyadda isbahaysigiisa siiyaan, kadibna ku qasbaan Mr Macron in uu u magacaabo ra’iisul wasaare, taasoo soo dedejin doonta xaalad loogu yeero “wada-noolaanshaha”.
Nidaamka bidixda waxaa ka mid ah mushahar kordhinta ugu yar, hoos u dhigista da’da hawlgabka ilaa 60 iyo qufulka qiimaha tamarta.
In kasta oo isbahaysiga Mr Melenchon uu ku guulaysan karo in ka badan 200 oo kuraas, saadaasha hadda jirta ayaa siinaysa bidixda fursad yar oo ay ku guulaysan karaan aqlabiyadda.
Mr Macron iyo xulafadiisa ayaa la filayaa in ay ku guulaystaan inta u dhaxaysa 260 ilaa 320 kursi, sida ay muujinayso codbixintii ugu dambaysay.
Habka codaynta ee labada wareeg ah waa mid adag oo aan la jaanqaadi karin taageerada dalka oo dhan ee xisbi, iyadoo siyaasiyiinta lagu soo doortay degmo.
Doorashada baarlamaanka ayaa sida caadada ah tartan adag u ah musharixiinta midigta-fog ee Faransiiska, maadaama dadka la tartamaya ay u janjeeraan dhanka wareegga labaad si ay u wanaajiyaan fursadaha musharax kale.
Waxaa hogaaminaysa Marine Le Pen, oo Mr Macron kaga adkaaday doorashadii madaxtinimo, Dibadbaxa National Rally wuxuu rajeynayaa inuu sameeyo wax ka wanaagsan shan sano ka hor, markaasoo uu ku guuleystay sideed kursi.
Markay haystaan ugu yaraan 15 kursi, kuwa midigta fog ayaa loo ogolaan doonaa inay dhistaan koox baarlamaan oo ay awoodo badan ku yeeshaan golaha.
Ms Le Pen lafteedu waa musharax u taagan in dib loogu soo doorto deegaanka ay ku xoogan tahay ee Henin-Beaumont, ee waqooyiga Faransiiska.
Natiijooyinka waxa kale oo laga yaabaa inay saamayn ku yeeshaan soo bixitaan codbixiye oo hooseeya oo la filayo. Cod-bixiyayaasha ayaa sheegaya in wax ka yar kala badh 48.7 milyan ee codbixiye ee Faransiiska la filayo inay dhiibtaan codadka.
Goobaha codbixintu waxay furan yihiin Axadda oo dhan ilaa 6pm wakhtiga maxaliga ah, marka laga reebo in qaarkood xidhmeen laba saacadood ka dib magaalooyinka waaweyn.
Golaha Shacbiga ayaa leh go’aanka kama dambaysta ah ee Guurtida marka ay timaado codeynta sharciyada.
Previous ArticleArsenal Ayaa Isha Ku Haysa Lasoo Wareegida Xiddiga Khadka Dhexe Ee Lazio Sergej Milinkovic Savic
Next Article Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Ayaa Wacad Ku Maray Inuu Taageero Weyn Uu Siin Doono Dhigiisa Ruushka
Dawlada Ruushka Ayaa soo bandhigay muwaadiniin Mareykan ah oo lagu la’aa dalka Ukraine
Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed Ayaa isku diyaarinaya Inay Jawaab Ka Bixiyan Daan daansiga kuuriyada waqooyi Ee Tijaabada nukliyeerka.
UK Ayaa Rwanda U Diri Doonto Magangalyo-doonkii ugu horeeyay
© 2022 RBN NEWS.
Live Radio Royal FM 92.3MHz